Sawirro: Beesha caalamka oo ku biirtay shirka golaha wadatashiga ee ka socda Muqdisho | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Sawirro: Beesha caalamka oo ku biirtay shirka golaha wadatashiga ee ka socda...
Muqdisho (Dalkaan.com) – Xubnaha golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra’iisul wasaaraha, madax goboleedyada iyo duqa Muqdisho ayaa maanta kulan la yeeshay wakiilada beesha caalamka oo ku biiray wada-hadallada uga socdo Teendhada Afisyoone.
Labada dhinac ayaa waxa ka wada-hadleen taageerada iyo doorka wakiilada beesha caalamka ee ku aadan dardargelinta doorashooyinka, gaar ahaan mida golaha shacabka Soomaaliya, sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiskra ra’iisul wasaaraha.
Warka kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa intaasi kusii daray “Ra’ iisul Wasaare Maxamed Rooble waxaa ka go’n tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gebogebeeyo doorashada, iyadoo turxaan bixinta iyo toosinta wixii ka soo laabtay lagala tashanayo dhammaan dhinacyada ay khuseyso sida Midowga Musharixiinta, Bulshada Rayidka ah, Haweenka iyo daneeeyeyaasha kale,”.
Wada-hadallada ayaa sidoo kale sii soconayaa, waxaana sidoo kale ku biiri doono xubnaha mucaaradka iyo bulshada rayidka, si ay madasha ugu biirayaan talooyinkooda.
Muqdisho (Caasimada Online) – Danjiraha Soomaaliya u qaabilsan Qaramada Midoobay Abuukar Cismaan Baalle oo wareysi siiyey Telefishinka Universal ayaa jawaab lama filaan ah ka...
DEG DEG: Farmaajo oo qaatay shahaadada musharaxnimada + Sawirro